DAAWO:-Haweenay Xaamilo ahayd oo Garoowe Lagu Kufsaday Lana dilay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
DAAWO:-Haweenay Xaamilo ahayd oo Garoowe Lagu Kufsaday Lana dilay
Hooyo lagu magacaabi jiray, Hodan Axmed Shanlayste ayaa lagu dilay magaaladda Garoowe ee caasimada Puntland, ka dib markii loogu dhacay guriga ay daganayd oo ku yaalla xaafadda Wadajir, sida laga soo xigtay dad daris la ah.
Marxuumad, Hodan Axmed Shanlayste ayaa ifka kaga tagtay wiil 3 sanno jira ah oo la joogay markii la dilayay iyo gabar 9 sanno jira ah oo dugsi ku maqnayd, balse markii ay ka soo laabatay loo sheegay in la dilay hooyadeed.
Baadhitaanno ayaa socda, walina si rasmi ah looma shaacin sida wax u dhaceen, balse waxaa jira calaamado muujinaya in kufsi loo gaystay Marxuumada, ka dibna ceejin lagu dilay, sida ay inoo xaqiijiyeen Saraakiil Caafimaad.
Wasiiro, Xildhibaanno iyo Odayaal ayaa kulan ay falkaan uga hadlayaan ku yeeshay gudaha Isbitaalka magaalada Garoowe, mana jirin wax war ah oo ay siiyeen wariyeyaasha oo muddo dheer banaanka u taagnaa.
Dumar badan ayaa tagay gudaha Isbitaalka, waxaana qaarkood ay diidan yihiin iney banaanka uga baxaan, iyaga oo ku duceeysanaya “Illaahoow soo qabo kuwii dilay”.